हामी जस्तो खानेकुरा खान्छौं, शरीर र मन त्यस्तै हुन्छ ! – Samacharpati
हामी जस्तो खानेकुरा खान्छौं, शरीर र मन त्यस्तै हुन्छ !
काठमान्डाैँ, १८ चैत । तपाईं हरेक गाँसमा कस्तो खाना रुचाउनुहुन्छ ? तेलमा राम्ररी तारेको, पिरो, अमिलो, मसलेदार, मासु । साथमा मदिरा पनि । यसमा ताजा–बासी भन्ने केही हुँदैन । पोषणको कुरा पनि भएन । बस्, जिब्रोमा पानी आउने हुनुपर्छ । मीठो लाग्नुपर्छ ।
यस किसिमको खाना खाइरहँदा तपाईं सोच्नुहुन्छ, ‘आहा ! कस्तो स्वादिलो ।’ त्यही खाना जब पेटमा पुग्छ, गडबडी सुरु हुन्छ । ज्यान भद्दा हुन्छ । पेट भारी हुन्छ । कता–कता गाँठो परे झै लाग्छ । तपाईंको शरीरबाट जाँगर, उत्साह, स्फूर्ति सबै एकाएक भाग्छ । तपाईंलाई अल्छी लाग्छ ।
के पनि हुनसक्छ भने यस किसिमको खानाले तपाईंमा उत्तेजना पैदा गर्छ । तन–मन भड्किलो बनाइदिन्छ । खानाको बर्गिकरणमा यसलाई तामासिक खाना भनिन्छ ।
तामासिक खानाले मनलाई उत्तेजित बनाउँछ र शरीरलाई विकारयुक्त । रोग, क्रोध निम्त्याउने खाना यही श्रेणीमा पर्छन् ।
त्यसो भए हाम्रो शरीरका लागि अनुकुल खाना कस्तो हुनुपर्छ ? पूर्खाहरुले यसको खोज गरेका छन् र व्यवस्थित तालिका तयार गरेका छन् । प्राकृतिक स्वाद भएको, रसिलो, रेसादार, ताजा र मौसमी खानेकुरा नै हाम्रो शरीरका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले सदियौंअघि नै खोज गरेका हुन् ।
शस्त्रमा भनिएको छ, ‘आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः’ । यसको अर्थ के भने, खानेकुरा शुद्ध छ भने अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ । सात्विक खानाले शरीरमा स्फूर्ति र उर्जा दिलाउँछ । मनलाई चंगा र आनन्दित बनाउँछ । बल, स्वास्थ्य र उल्लास प्राप्त हुन्छ ।
हाम्रो शरीरले प्राकृतिक खानेकुराको माग गर्छ । प्रकृतिले जस्तो दिन्छ, जुन मौसममा दिन्छ, जुन भूगोलमा दिन्छ, त्यही अनुसार खाना हाम्रो शरीरका लागि अनुकुल हुन्छ । तर, हामी अप्राकृतिक एवं कृतिम खानेकुरामा लोभिएका छौं । यस्तो खानेकुरा खाइरहेका छौं, जसबाट शरीरले यातना भोगिरहेका छन् ।
जबकी खाना नै त्यस्तो स्रोत हो, जसबाट हाम्रो शरीर निर्माण हुन्छ । खानेकुरामार्फत प्राप्त हुने पोषक तत्वबाट शरीरका कोष निर्माण हुन्छ । रगत बन्छ । यसको अर्थ खानाको सोझो सम्बन्ध हाम्रो शरीर र स्वस्थसँग छ । शरीरको सम्बन्ध मनसँग छ । त्यसैले त हाम्रा पूर्खाहरुले भन्दै आए, जस्तो खानेकुरा खान्छौं, शरीर र मन त्यस्तै हुन्छ । शुद्ध, ताजा, सन्तुलित र सुपाच्य खानाले शरीरलाई निरोगी र दीर्घजीवि बनाउँछ । मनलाई उमंगित बनाउँछ ।
तर, खाना मात्र पनि पर्यात हुँदैन जबसम्म त्यसलाई पकाउने, खाने विधी सही हुँदैन । कुनैपनि खानेकुरालाई कसरी पकाउने ? कति समय पकाउने भन्ने कुरा जिब्रोको स्वाद भन्दा उक्त खानेकुराको प्रकृति हेरेर गर्नुपर्छ । स्वादिलो बनाउने चक्करमा हामीले खानेकुरामा रहेको पोषक तत्व नष्ट गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले पकाउने विधी पनि सही हुनुपर्छ ।
माटोमा अनेकथरी खानेकुरा उत्पादन हुन्छन् । ति खानेकुरा हामी खान्छौं । अर्थात धर्तीको एउटा अंश हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ । यसको अर्थ हाम्रो शरीर र प्रकृति (हावा, पानी, माटो) एकअर्काका पुरक हुन् । त्यसैले त भनिएको छ, प्रकृतिसँग जति तालमेल मिलाउन सकिन्छ, उत्तिनै स्वस्थ्य, खुसी र निरोगी भइन्छ ।
उमा मा.वि मा तीन कोठे ट्रस भवन हस्तान्तरण
राष्ट्रिय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एञ्जिला पुस्तक पसललाई